Ny androaniko | Mey 2011
[Ankapobeny ] 10 Mey, 2011 21:35
"Tia" hono, i raozigasy, ka hanandratra izany amin'ny "Indram-peo"
Nahita masoandro, i TIA : boky voalohany nosoratan’i Raozigasy. Ary ho fampahalalana izany boky izany dia nomanina ilay hetsika INDRAM-PEO.
Fa iza moa i Raozigasy
Raozigasy : no solon’anarana nofinidin-dRamananjato Hajalalaina Andriamiharisoa entiny hamoahana sy hizarana ireo vetsovetsony.
Raozigasy : tambatr’ilay Raozy vonikazom-pitiavana sy ilay Gasy manamarika ny fihaviana.
Raozy : lokon’ny fitiavana ; entina mizara ny hotrakotraky ny fo raha faly, entina mampitony ny jalim-po anaty raha malahelo, voninkazon’ny embona sy ny vetsovetso. Haingon’ny fo mitempo fitia, milanja ny haban’ny sento zaraina. Miombon-taintaina, mitambatra tsiky, mizara hasambarana,
Gasy : lokon’ny fihaviana; entina mirehareha amin’ny kolotsainy manan-karena, entina iavahana amin’ny kantony tsy hita noanoa, taratry ny raitra sy ny lafatra malagasy maro karazana. Asandratra hiavaka amin’ny hafa rehetra, avoitra ho tabihan’ny firenena. Ajoro tsy ho takon’ny haitraitram-pandrosoana.
Raozigasy dia filazana ihany koa ilay raozidia miavaka sy manimba ny tontolon’ny raozy tsotra rehetra, miavaka i Raozigasy satria miezaka mampiely patrana ny kanto malagasy manerana izao tontolo izao ary manabe voho hatrany ny tenin-drazany.
Raozigasy sy ny Tononkalo Malagasy dia "lamban’akoho ka aina no fetra".
Tia indray kosa no amboara voalohany narafitr’i Raozigasy ho fehezan-tononkalo, hizarany amin’ny mpamaky ny fiTIAvana ao anatiny
Mandrosoa hasina raozigasy a !